Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Waa maxay aqoon ? By. Liban Miyir Abdi (Kulmiye)
Maqaal: Waa maxay aqoon ? By. Liban Miyir Abdi (Kulmiye)
Niyad adag oo ikhlaas kudhisan, talo saarasho eebe, dadaal mintid ah oo xidhiidhsan kana anba qaadaya aqoon ayaa lagu gaadhaa guusha.
Aqoontu waa awood iyo itaal, waana aalad wax lagu qabsado, waa ilays iyo iftiin wax lagu arko. Aqoontu waa quudka koriya garaadka ee toosiya habka fikirka ruuxa kadibna xagal daaca udiida go’aamada lagaadho iyo habraaca wax qabadka iyo fulinta hawlaha halganka.
Waxaan malahayga isleeyahay inaad kuligiin kawada dharagsantihiin meeqaamka ahmiyada iyo martabada ay diinteenu Cilmiga iyo Aqoonta siisay iyo inta aayado qur’aan ah ama xadiith Nabiga (SCW) kasugnaaday ee arinkaas sida cad uqeexay.
Aqoontu waa iimaanka camalka, waxayna suuro galisaa amuuro badan oo ay ka mid yihiin 15kan qodob ee hoose:
1- Aqoonta waxaa lagaga badbaadaa gafafka culculus ee qaangaadhka ah.
2- Aqoontu waxay fududaysaa in la fahmo xigmada kukaydsan sooyaalka iyo cibradaha duruusta taariikhda.
3- Aqoonta waxaa lagu kasbadaa xigmad suurta galisa in ay xubnuhu isjeclaadaan, oo ay wada fuliyaan wax qabad tayo leh, iyaga oo kol walba ku kala duwan aragtida, hadana la garwaaqsado in isqadarin iyo is aaminid, (mutual respect and trust) ay fure uyihiin wada shaqayn tayo leh oo idil.
4- Aqoontu waxay balaadhisaa tasawirka guud ee ruuxa, waxayna kobcisaa awooda hal abuur iyo huru marinta kartida wax qabad ee qofka.
5- Aqoontu waxay sugtaa shiishka wax itimaalinta iyo sii odoroska arimaha ku kaydsan timaadada ee inta badan hal xidhaalaha adag ah.
6- Aqoontu waxay suurto galisaa in si sax ah oo ka madax banaan rabitaan qofeed/kooxeed (passion and prejudice) loo qiimeeyo dhacdooyinka iyo arimaha halganka xidhiidhka la leh.
7- Aqoontu waxay xoojisaa guud ahaan geesinimada, gaar ahaana mida aadamiga ah ee keenta xaq u hiilinta iyo is hortaaga dulmiga iyo fasahaadka.
8- Aqoontu waxay xadaysaa damaca iyo ismahdinta ruuxa, waxayna qodimo adag umudaa dareenka isku kalsoonida iyo ku kalsoonida nidaamka halgan ee ururka.
9- Aqoontu waxay suurta galisaa inuu ruuxu garwaaqsado iimihiisa, qirtana gafafkiisa, kuna dhiirado sixida ilduufkiisa, wakhtiga ku haboon, isaga oo haleelaya habka munaasabka ah.
10- Aqoontu waxay ruuxa huwisaa huga xushmada iyo qadarinta, waxayna huftaa akhlaaqda iyo dabeecadihiisa.
11- Aqoontu waxay suurto galisaa in laxakameeyo khilaafaadka wax duminta kolka ay shidmaan.
12- Aqoontu waxay suurto galisaa in hawlaha faraha badan ee halganka loo dajiyo qorsheyaal iyo barnaamijyo maangal ah, waana aalad lagu kala hago la iskuna waafajiyo hawlaha kala duwan ee halganka.
13- Aqoontu waa hiil aad kugu dhow oo aad makaansatid marka aad baahantahay.
14- Aqoontu waxay isku dheeli tirtaa dareemada cadiifada iyo garaadka ee inta badan ruuxa gudihiisa isku hardiya ama is hadheeya, waxayna iftiimisaa cidhibta danbe, cawaaqibta iyo halisaha ka dhalan kara go’aamada lagu deg’dego.
15- Ugu danbayntii aqoontu waxay xoojisaa lana xidhiidhaa kartida, maaraynta arimaha sida kadiska ah u aloosma ee lama filaanka ah.